Pepper (လူ​သား​များ​ရဲ့​ခံစား​မှု​ကို​နားလည် ပေး​နိုင်​သော စက်​ရုပ်) | J-Myanmar
phyo — Jun 6, 2014
ဂျပန်​ပြည်​မှ SoftBank အကြီးအကဲ Son Masayoshi က ၆​လ​ပိုင်း ၅​ရက် နေ.မှာ ကျင်းပ​သော စာ​နယ်​ဇင်း ရှင်းလင်း​ပွဲ မှာ လူ​လို​ခံစား​ပေး​နိုင်​သော စက်​ရုပ် （Pepper）ကို ကြော်​ြ​ငာ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ သမ​ရိုး​ကျ စက်​ရုပ် များ​နဲ့ မ​တူ​တဲ့​အချက်​က​တော. （Pepper）ဟာ လူ​သား​တွေ​ရဲ့ ခံစား​မှု​ကို နားလည်​နိင်​ခြင်း ပါ။ ၂​၀​၁​၅​ခု​နှစ်​၂​လ​ပိုင်း​မှ စတင်​ပြီ ရောင်းချ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
（Pepper）ရဲ့ ခန္ဓာ​ကိုယ် အတွင်း​မှာ လူ​လို​ခံစား​ပေး​နိုင်​သော Emotional အင်​ဂျင် လို.ခေါ်​တဲ. အဆင့်​မြင့် Artificial Intelligence ကို တပ်​ဆင် ထား​တာ​ပါ။ Feeling အင်​ဂျင်​ကို​အသုံးပြု​ခြင်း​အား​ဖြင့် လူ​သား​မျက်နှာ တွင်ပေါ်​လာ​သော​အမူ​အယာ​ကို ခွဲ​ချမ်း​စိတ်ဖြာ​မှတ်သား​နိုင်​ခြင်း ၊ အပြုအမူ(Behaviour)များ​ကို မိမိ ကိုယ်​ကို ပြန်လည်​သင်ကြား​နိုင်​ခြင်း​စ​သော စွမ်း​ရည်​များ​ကို ပိုင်ဆိုင်​ထား​ပါ​တယ်။
ဥပမာ ကလေး​၁​ယောက်​ကို စာအုပ် အသံ​ထွက် ဖတ်​ခိုင်း ပြီး အဆို​ပါ ကလေး ရဲ့ မျက်နှာ​အမူအရာ ကို​မှတ်သား နိုင်​ပါ​တယ်။ ထပ်မံ​ပြီး အမျိုး​မျိုး သော လူ​သား​တို့​ရဲ. ခံစား​မှု အမူအရာ​များ​ကို မှတ်သား ကာ မိမိ​ကိုယ်​ကို သင်ကြား​ခြင်း​နည်း​ပါ။
ထပ်မံ​ပြီး​တော့ Pepper ဟာ မိမိ ၁ ​ေ​ယာက်​ထဲ သင်​ယူ​ယုံ မျှ​မက အင်​တာ​နက် Cloud ဝန်​ဆောင်​မှု​ကို​အသုံးပြု​ပြီး တခြား Pepper များ​ရဲ့ ဥာဏ်​ရည်​ကို​လဲ မှတ်သား​ရ​ယူ နိုင်​ပါ​တယ်။
၆​လ​ပိုင်း ၆​ရက်​ေ​န့​မှ စတင်​ပြီး​တော့ တို​ကျို SoftBank ဂင်​ဇာ ပြ​ခန်း နဲ့ SoftBank Omotesando ပြ​ခန်း များ​မှာ​သွား​ရောက်​ကြည့်ရှူ​နိုင်​မှာ​ပါ။
Written by Phyo Phyo (Jmyanmar.net)
Next post ဒုတိယ​ရွှေ​လီ သို့မဟုတ် မန္တလေး​ပါ​ရာ​ဒိုင်း
Previous post လက်​သွေးကြော​ကို အသုံးပြု​ပြီး ငွေ​ထုတ်ယူ​ဆောင်ရွက်​နိုင်​မယ့် ATM နည်း​ပညာ​သစ်​ကို Hitachi မိတ်​ဆက်